pixel2နှင့် pixel2xl ဈေးနှုန်းများ၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ ယူအက်စ်အေ! နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Pixel2စျေးနှုန်းများကအမေရိကကိုပြုံးနေစေသည်။
ယူအက်စ်အေ! နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Pixel2စျေးနှုန်းများကအမေရိကကိုပြုံးနေစေသည်။
Pixel အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပြီးသည့်နောက် Google သည် Apple ကိုဆွဲထုတ်ပြီး ၂၀၁၆ သီးနှံဈေးနှုန်းကိုတစ်ရာလျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Google Pixel ကို Google Store မှဒေါ်လာ ၅၄၉ ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး၎င်း၏ပိုကြီးသည့် Pixel XL ကသင့်အားဒေါ်လာ ၆၆၉ ကျသင့်မည်။ သင်ပိုကြီးတဲ့ 128 GB သိုလှောင်မှုဗားရှင်းကိုလိုချင်ရင်ဒီတစ်ရာကိုပေါင်းဖို့လိုသေးပေမယ့်လမ်းကြောင်းကရှင်းနေပါတယ်။ Google က Pixel ကြားမှာအသစ်လုပ်တာတစ်ခုစီလုပ်လိမ့်မယ်။ သင်သိပါတယ်၊ တောင်ကြီးတောင်တောင်ကတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အခြားပြိုင်ဖက်လို ။
ယခုအခါ Google သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ကလပ်ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်
ယခု Pixel2အသစ်သည်၎င်း၏ဒေါ်လာ ၆၄၉ တန်ဖိုးရှိမရှိနှင့် Google Pixel2XL ၏ ၇၄၉ ကို Google ကတောင်းနေခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကိစ္စဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ပိုမိုတတ်နိုင်သော Pixel ကိုလိုချင်ပါက Google သည်သင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Apple နှင့် Apple တို့၏ရောင်းအားနည်းဗျူဟာကိုတုပနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ သူသည် Cupertino တွင်ပြုလုပ်သည့်အခြားစျေးနှုန်းလှည့်ကွက်များကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန် - နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်မှုအတက်အကျသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအကောက်ခွန်နှုန်းထားများကိုချိန်ညှိရန်အတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားရှိစတိုးဆိုင်များ၏အမှတ်အသားကိုချိန်ညှိသည်။ အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ပြည်ပတွင်ဈေးပိုကြီးသောအိုင်ဖုန်းများဖြစ်လာသည်။
Google & apos; s ဖုန်းများကိုဒေသအလိုက်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည့်ဂျာမန်သို့မဟုတ်သြစတြေးလျပရိသတ်များထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအတွက်အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Pixels အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဤအရာသည်ပြောစရာမလိုပါ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသောဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အတားအဆီးအားဖြတ်ကျော်သော Google Pixel2။ အချိန်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာ။
pixel264 GB ကို
Pixel2128 GB ကို
Pixel2XL 64 GB ကို
Pixel2XL 128 GB ကို
အမေရိကန် $ 650 $ 850 $ 850 $ 950
ဗြိတိန် ဒေါ်လာ ၈၂၉ (ပေါင် ၆၂၉) ဒေါ်လာ ၉၆၁ (ပေါင် ၇၂၉) ဒေါ်လာ ၁၀၅၂ (ပေါင် ၇၉၉) ဒေါ်လာ ၁၁၈၅ (ပေါင် ၈၉၉)
ကနေဒါ $ 719 (CAD 899) $ 824 (CAD 1029) $ 927 (CAD 1159) $ 1032 (CAD 1289)
ဂျာမနီ $944(ယူရို ၇၉၉) $1073(ယူရို ၉၀၉) ဒေါ်လာ ၁၁၀၉ (ယူရို ၉၃၉) $1239(ယူရို ၁၀၄၉)
အီတလီ n /an /a$1168(ယူရို ၉၈၉) n / a
သြစတြေးလျ $ 846 (AUD 1079) $ 964 (AUD 1229) $ 1097 (AUD 1399) $ 1215 (AUD 1549)
အိန္ဒိယ $ 938 (₹ ၆၁၀၀၀) n /an /an / a
အောက်တွင် iPhone X ကို giggles အတွက်သာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောတွက်ချက်မှုအချို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ပြည်ပအရောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Google သည်တူညီသော playbook ကိုလိုက်နာနေသည်ကိုဥပမာ ပေး၍ ပြည်တွင်းစျေးကွက်သည်တတ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ဝံ။ ' အီတလီလူမျိုးတွေမှာအများကြီးခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအကုန်အကျအများဆုံး Pixels (သို့) iPhone တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းဟာကော်ပိုရိတ်လိုဘကြီးမှုထက်ပြည်တွင်းအခွန်များ၊ တာဝန်များနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်လိမ့်မယ်။
Google, Pixel2နှင့် Pixel2ဟန်းဆက်သစ်များဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုရည်မှန်းထားသည်။ Apple, Samsung, Huawei နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာရရှိခြင်းတို့နှင့်အညီလိုက်ဖက်သည်။ ။
Samsung Galaxy S7 အစွန်းမီး
Gorilla ဖန်ခွက်5ခြစ်စမ်းသပ်မှု
Samsung သည် S21 Ultra အစုအဝေးစျေးနှုန်းများနှင့် Galaxy Week ကိုစတင်ခဲ့သည်
Samsung သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Galaxy S20 စီးရီးများအရောင်းအ ၀ ယ်လျှော့စျေးများကိုပေးနေသည်
သင်၏ Android ကိရိယာနှစ်ခုလုံးမှသတိပေးချက်များဖြင့် Facebook အကောင့်နှစ်ခုကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
Apple iPhone 12 Mini ဘက်ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှု - ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲ။
Samsung Galaxy S21 ရက်စွဲ၊ ဈေး၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတင်းများ
Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 နှင့် Exynos 8890 အရသာနှိုင်းယှဉ်ထားသည်
Apple က Apple Watch နှင့်တွဲဖက်ထားသော iPhone ကိုစက်ရုံပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်အကြံပြုသည်။ ငါဒီလိုလုပ်ဖို့လိုသလား
Android အတွက် WhatsApp မှ Read Receipts ကိုပိတ်ပါ
ယခုတွင် AT&T ၏အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်များ
သင်သိပါသလား - အချို့သော Sony Xperia စမတ်ဖုန်းများတွင် FM transmitter လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်